FIFANITSANANA CAN : Nomotsanin’ny Barea tamin’ny isa 6 noho 2 tao amin’ny taniny ny ekipan’i Niger
Tontosa tao Niamey-Niger, omaly ny lalao mandroso nifandonan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Ekipam-pirenen’i Niger. 19 novembre 2019
Fandresena miezinazina no azon’ny Barea satria nomontsanany tamin’ny isa mavesatra 6 noho 2 tao amin’ny tany misy azy ny Niger. Vao nanomboka minitra vitsy ny lalao dia nahita isa iray ry zareo Nizeriana. Izy ireo teto no nampiditra ny baolina tao anaty harato voalohany. Hita ho nalaindaim-pihetsika ny Barea vao nahazo io isa iray io ny Niger saingy tsy kivy fa niezaka nitady isa iray hatrany hampitoviana ny baolina. Minitra vitsy taorian’izay, tontosa ny faniriana satria nahita isa iray isika. Ady sahala iray sy iray ny baolina. Nanomboka teo amin’izay ny fandresena misesisesy.
Teo amin’ny minitra faha-28 nahita isa iray indray isika Malagasy. Nanao fahadisoana ry zareo Nizeriana ka nahazoantsiaka daka fahadisoana. Nodakain’i Carolus izany teto, noraisin’i Lalaina Nomenjanahary na i Bolida, notsarainy mahitsy ka avy hatrany dia nigorobaka ny harato. Roa sy iray indray ny baolina. Nanatombo ny isan’ny Barea. Niady ny lalao saingy nahatsapa reraka ny ekipa roa tonta ka nahazo fiatoana kely teo amin’ny minitra faha-32.
Minitra faha-34, nahazo baolina malalaka be i Carolus saingy nofinganin’ny mpilalaon’i Nizera ka avy hatrany dia nitrotrosona mafy tamin’ny tany. Nahazo daka fahadisoana indray ny Barea teto. Natolotra hodakain’ny Kapiteny vaovao, Abel Anicet ny baoliona ka nigorobaka tanteraka indray ny harato. Tsy tanan’ny mpiandry tsatokazo Niger ny baolina.
Nisesisesy hatrany ny fanafihana nanjakazanakan’ny ekipam-pirenena Malagasy. Minitra faha-39, tafidr’i Carolus indray ny baolina fahefatra. Tolotra avy any amin’ny ekipa namana no noraisin’ity farany, namitaka kely indroa izy, nahazo malalaka ka avy hatrany dia nitsara. Tsy maty avy hatrany ny baolina teto fa mbola nidona tamin’ny tsatokazo aloha vao niditra an-kalalahana. Minitra faha-54, tafiditr’i Voavy Paulin indray ny baolina fahadimy. Tifi-davitra no nataony teto saingy tsy voasakan’ny mpiandry tsatokazo Nizeriana izany ka avy hatrany dia tany anaty harato. Minitra faha-64 nahazo isa iray indray ny Barea tamin’ny alalan’i Jeremi Morel. Io no nameno ny isa ho enina. Daka an-tsisiny avy aty amin’ny ilany havanan’ny kianja no noraisin’ity farany ka avy hatrany dia nigorobaka indray ny harato. Taty amin’ny minitra faha-80 nandritra ny fizaram-potoana faharoa indray ny Nizera vao nahita isa iray ary tsy niova intsony ny lalao mandra-pahatapitry ny fotoana na dia nisy fe-potoana fanampiny 2 minitra aza.
Horakora-pifaliana nanerana ny faritra maro
Tahaka ny tamin’ny Can tany Egipta farany teo, mitondra fifaliana sy firaisan-kina ho an’ny Malagasy hatrany ny Barea. Vantany vao tapitra ity lalao nifandonan’ny roa tonta ity dia nivoaka ny trano naneho ny hafaliany ny mponina tamin’ny faritra maro teto an-drenivohitra sy tany amin’ny faritra hafa tao an’i Mahajanga sy Toamasina. Ho an’ny teny Ambohipo, ohatra, naharitra ora maromaro mihitsy ny fanehoam-pifaliana vao tapitra. Mitondra fanantenana ho an’ny Malagasy hatrany ny Barea isaky ny milalao, hoy ireo mpijery. Rariany ny hitohizan’ny toy izao satria ny Barea irery no nahavita nampiray ny Malagasy tsivakivolo.